Read in EnglishRead in Myanmar
မူလစာမျက်နှာမြန်မာအကြောင်းဝန်ကြီးဌာနအကြောင်းဈေးကွက်ဈေးနှုန်းကုန်သွယ်မှုသတင်းကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းများဆက်သွယ်ရန်	ပို့ကုန်သွင်းကုန် သတင်းလွှာကုန်သွယ်မှုနှင့်ဆိုင်သော ဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများဥပဒေများအမိန့်ကြော်ငြာစာများသိမှတ်ဖွယ်ရာ အဖြာဖြာအကောက်ခွန် သက်သာခွင့်အတွက် ပင်ရင်း ထောက်ခံချက်ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများ၏ အကောက်ခွန် နှုန်းထားများဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ခံစားခွင့်ရှိသော CO Form ပုံစံများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Trade Directories များစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာ - ၁ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာ - ၂သုတကဏ္ဍနိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများအာဆီယံကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အိန္ဒိယ၊မြန်မာ၊သီရိလင်္ကာ၊ ထိုင်း စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲဧရာဝတီ၊ ကျောက်ဖရား၊ မဲခေါင်စီးပွားရေး ပူးပေါင်းမှု မဟာဗျူဟာအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၏ကုန်သွယ်မှုစနစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအဟန့်အတားများစားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးပင်မဥပဒေဆက်စပ်ဥပဒေများလျှင်မြန်စွာသတိပေးလှုံ့ဆော်မှုစနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော် စားသုံးသူအရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့သင်တန်းပေးရေးနှင့် အသိပညာပေးရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အထွေထွေသတင်းအချက်အလက်စားသုံးသူများတိုင်တန်းသည့် လက်ကမ်းကြော်ငြာအတွက် အာဆီယံဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုန်စည်ပြပွဲများပြည်တွင်းပြည်ပ ကုန်စည်ပြပွဲများလှုပ်ရှားမှုပြည်တွင်းပြည်ပ ကုန်စည်ပြပွဲများစာရင်းမော်တော်ကားသတင်းများမော်တော်ကားအရောင်းစင်တာ၏လိပ်စာများမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ အခွန်နှုန်းထားများမော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများမော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော Model အလိုက်ဈေးနှုန်းများ၁၉၉၆ မှ ၂၀၀၆ မော်ဒယ်ထိ မော်တော် ယာဉ် ဈေးနှုန်းများ၂၀၀၇ မော်ဒယ်နှင့်အထက် မော်တော် ယာဉ် ဈေးနှုန်းများTruck နှင့် Box Truck ဈေးနှုန်းများ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ် CIF ဈေးနှုန်းများ၁၉၉၇ မှ ၂၀၀၇ မော်ဒယ်ထိ မော်တော် ယာဉ် ဈေးနှုန်းများ၂၀၀၈ မော်ဒယ်နှင့်အထက် မော်တော် ယာဉ် ဈေးနှုန်းများ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ ကုန်တင်ယာဉ်နှင့် ကရိန်းဈေးနှုန်းများ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ ကုန်တင်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ Bus ဈေးနှုန်းများ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ Pick Up (2 Door) / Extra Cab/ Space Cab ဈေးနှုန်းများအသုံးဝင်သောဝက်ဆိုဒ်သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်
၂၀၁၃တွင် မော်တော်ယာဉ် CIF ဈေးနှုန်းများရှာရန်
၁၉၉၆ မှ ၂၀၀၇၂၀၀၈ မှ ၂၀၁၃ Year Range
-All-BusHeavy TruckHatchBackPick Up/ Extra Cab/ Space CabLight TruckVanWagonDouble CabSaloon Brand
-All-AcuraAlfa RomeoAll BrandAudi BentleyBMWCadillacChevroletChryslerCity BusDaewooDaihatsuDodgeExpressFerrariFiatFordFotonGMGMCHaimaHoldenHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJACJaguarJeepKIAKIA/ HyundaiLandroverLexusLincolnMaybachMazdaMercedesMG 3MiniMini BusMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRolls-RoyceSamsungSsaungyongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvo Sub Brand
-All- CIF ဈေးနှုန်း
စီးပွား/ကူးသန်းထုတ် စာစောင်များ	ပြည်တွင်းပြည်ပကုန်စည်ပြပွဲများစာရင်း
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပမည့် ပြည်တွင်းကုန်စည်ပြပွဲများ
ICE Wonder Land Exhibition
Single Country Trade Fair & ၂-၃-၂၀၁၂ မှ
Bangladesh - 2012 ၄-၃-၂၀၁၂ ထိ
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပမည့် ပြည်ပကုန်စည်ပြပွဲများ
New Year Kunming Int'l
Jewellery Fair 2012
BOI (Borad of Investment)
11th Auto Expo 2012
23th Int’l Jewellery Tokyo
Jaffan Int’l Trade Fair
Plast India 2012, 8th Int'l Plastic
Tex Trends India Fair 2012
11th SAAR Trade and Tourism
49th Bangkok and Jewellery
Fair - 2012
The First conference for the
control of halal food
Int’l Construction week 2012
20th Chittagong Int’l Trade
ရက် ၃၀ ကြာ
Hong Kong Int'l Jewellery
Show - 2012 (A)
Show - 2012 (B)
Riyadh Int’l Trade Expo
Asia Fair -2012
3rd TEXTECH Sri Lanka 2012
4th Int’l Horti Expo 2012 ၊
India Potato Expo 2012 နှင့်
7th Int’lFlora Expo 2012
The 37th Int'l Food & Beve-
(FOODEX Japan 2012)
India Sustainablity Conclave
Sri Lanka Expo 2012
2012 Macao Int'l Environment Coo-
peration Forum & Exhibition
Int’l Expo 2012
China Import & Export Fair,
Kunming, The 5th South Asian
Countries Trade Fair
9th China- ASEAN EXPO
SIAL the Global Marketplace
စဉ် ပြည်တွင်းကုန်စည်ပြပွဲအမည် ကျင်းပမည့်ရက် နေရာ ၁။
၁၅-၉-၂၀၁၁ မှ ၁၈-၉-၂၀၁၁ ထိ
၈-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၁၄-၁၁-၂၀၁၁ ထိ
၁၇-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၂၀-၁၁-၂၀၁၁ ထိ
တရုတ်စက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲ - ၂၀၁၁
၁၇-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၁၉-၁၁-၂၀၁၁ ထိ
ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲ - ၂၀၁၁
၁-၁၂-၂၀၁၁ မှ ၃-၁၂-၂၀၁၁ ထိ
၁၅-၁၂-၂၀၁၁ မှ ၁၈-၁၂-၂၀၁၁ ထိ
စဉ် ပြည်ပကုန်စည်ပြပွဲအမည် ကျင်းပမည့်ရက် နေရာ ၁။
၇-၉-၂၀၁၁ မှ ၁၂-၉-၂၀၁၁ ထိ
၂၁ ကြိမ်မြောက် သီရိလင်္ကာအရှေ့မြောက်အာရှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုပြပွဲ-၂၀၁၁
၈-၉-၂၀၁၁ မှ ၁၁-၉-၂၀၁၁ ထိ
၈-၉-၂၀၁၁ မှ ၁၀-၉-၂၀၁၁ ထိ
၉-၉-၂၀၁၁ မှ ၁၁-၉-၂၀၁၁ ထိ
၁၄-၉-၂၀၁၁ မှ ၁၈-၉-၂၀၁၁ ထိ
The 75th Fiera del Levante International Trade Fair-2011
၁၀-၉-၂၀၁၁ မှ ၁၈-၉-၂၀၁၁ ထိ
၉ ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာသစ်နှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ၂၀၁၁
၂၇-၉-၂၀၁၁ မှ ၂၉-၉-၂၀၁၁ ထိ
၁၆ ကြိမ်မြောက် မကာအိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲ
၂၀-၁၀-၂၀၁၁ မှ ၂၃-၁၀-၂၀၁၁ ထိ
၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲ
၂၁-၁၀-၂၀၁၁ မှ ၂၆-၁၀-၂၀၁၁ ထိ
၁၁ ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာအော်ဂဲနစ်ကုန်စည်ပြပွဲ
၁-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၃-၁၁-၂၀၁၁ ထိ
The Third World Fruit & Vegetable Trade Fair 2011
၄-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၆-၁၁-၂၀၁၁ ထိ
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဗီယက်နမ်ဆန်စပါးပြပွဲ ၂၀၁၁
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ Soc Trang မြို့
၉-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၁၂-၁၁-၂၀၁၁ ထိ
၁၀-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၂၅-၁၁-၂၀၁၁ ထိ
၁၁-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၁၄-၁၁-၂၀၁၁ ထိ
၁၄-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၂၇-၁၁-၂၀၁၁ ထိ
၁၆-၁၂-၂၀၁၁ မှ ၂၆-၁၂-၂၀၁၁ ထိ
ဖော်ပြပွဲကုန်စည်ပြပွဲများတွင် ပါဝင်ပြသလိုသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာများသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါသည်-
ဖုန်း ၊ +၉၅-၆၇-၄၀၈၃၁၀
အမှတ်(၂၉)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊
ဖုန်း၊ +၉၅-၆၇-၂၁၄၃၄၄ / ၂၁၄၃၄၅ / ၂၁၄၃၄၆ / ၂၁၄၃၄၇ / ၂၁၄၃၄၈ / ၂၁၄၃၄၉
ဖက်စ်၊ +၉၅-၆၇-၂၁၄၄၈၃ / ၂၁၄၄၈၄
MINISTRY OF COMMERCEBuilding 3, Nay Pyi Taw, The Republic of Union of Myanmar.Tel: 067 - 408002, Fax: 067 - 408004Email: mochmo@moc.gov.mm, mocdhmo@moc.gov.mm@2011 Ministry of Commerce. All rights reserved. Powered by Inforithm-Maze
www.commerce.gov.mm	Visitors 3784659 Since June 2008